२०१ Black कालो फ्राइडे र क्यू Facebook फेसबुक विज्ञापन प्लेबुक: लागत कसरी बित्ने बित्तिकै कसरी सक्षम रहन सकिन्छ Martech Zone
छुट्टी किनमेल मौसम हामी मा छ। विज्ञापनदाताहरुका लागि Q4 र विशेष गरी ब्ल्याक फ्राइडे वरपरको हप्ता वर्षको कुनै पनि समय भन्दा फरक छ। विज्ञापन लागत सामान्यतया २%% वा अधिक द्वारा स्पाइक हुन्छ। गुणस्तरीय सूचीको लागि प्रतिस्पर्धा कडा छ।
इकमर्स विज्ञापनदाताहरु आफ्नो उछाल समय प्रबन्ध गरीरहेका छन्, जबकि अन्य विज्ञापनदाताहरु - जस्तै मोबाइल खेल र अनुप्रयोगहरू - केवल वर्ष भरमा बन्द हुने आशा गरिरहेका छन्।
लेट क्यू ret खुद्रा विक्रेताको लागि वर्षको व्यस्त समय हो, त्यसैले यो अन्य विज्ञापन प्लेटफार्महरू शान्त छन् जस्तो छैन। तर फेसबुक विज्ञापन विशेष गरी अक्टुबर देखि डिसेम्बर २rd सम्म प्रतिस्पर्धी हुन्छ। तर पनि फेसबुक विज्ञापनहरू मूल्य ढिलो Q4 को समयमा स्पाइक, यो अझै पनि सहरमा सबै भन्दा राम्रो प्लेटफर्म हो। अधिकांश प्रमुख विज्ञापनदाताहरू आक्रामक रूपमा बोली लगाईनेछ।
फुलेको मूल्यको साथ पनि, प्राय जसो ईकामर्स विज्ञापनदाताहरूले राम्रो गर्छन्। बाट भर्खरको अध्ययन शॉपिफाई प्लस इ-कमर्स मार्केटरहरूले देखाए कि फेसबुक विज्ञापन नयाँका लागि सब भन्दा प्रभावकारी च्यानल हो ग्राहक अधिग्रहण बिदाको समयमा
अवश्य पनि, यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि प्रत्येक वर्ष विज्ञापन ब्ल्याक फ्राइडे, साइबर सोमबार, र सबै डिसेम्बर बिदाको वरिपरि बढी महँगो हुन्छ। प्रत्येक विज्ञापनदातालाई यो थाहा छ। तिनीहरू बस एक बहादुर अनुहारको साथ मौसममा जान्छन्, उनीहरूको वार्षिक लक्ष्यहरूमा हिट गर्न उच्च बोली गर्न तयार छन्। छुट्टीको समयमा फेसबुक विज्ञापन ड्यासबोर्डमा हेरेको कोही कोहीले उनीहरूको प्रत्येक क्लिकको लागतलाई हेर्दा एक गुणा कोइला निल्यो।
र निश्चित रूपमा पर्याप्त: com०% ईकमर्स मार्केटरहरू भन्छन् "बढ्दो विज्ञापन खर्च" छुट्टी मार्केटिंगको लागि चिन्ता हो।
खर्च र प्रतिस्पर्धाको बावजुद Q4 ठूलो अवसर हो। खुद्रा विक्रेताहरु को लागी, यो बर्ष को सबै भन्दा राम्रो खरीद मौसम अधिकतम गर्ने अवसर हो। मोबाइल खेल र अनुप्रयोगहरूको लागि, छुट्टिहरू बर्षको सब भन्दा लागत कुशल विज्ञापन मौसम हो र २०२० को सब भन्दा कम सीपीएम कुन हुनेछ।
तपाइँलाई मौसम नेभिगेट गर्न मद्दतको लागि, यहाँ पाँच छन् फेसबुक विज्ञापन उत्तम अभ्यासहरू लेट Q4 को लागी:
१. विज्ञापन खर्च वेभमा रणनीति पालीहरू प्रबन्ध गर्नुहोस्।
ठीक भयो, छुट्टि विज्ञापनको लागि र्याम्प अप छुट्टीहरू जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। विज्ञापनदाताहरू retargeting, ईमेल सुची, र अन्य अधिक लागत प्रभावी च्यानल डिसेम्बर 8 पछि लिन सक्दछth - if तिनीहरूले पहिले आफ्नो अभियानहरू राम्रो गरी सकेको छ।
तर क्रिष्टमस-पछि शपिंग बूमलाई कम महत्त्व नराख्नुहोस्। सबैलाई आफ्नो क्रिष्टमस पैसाको साथ स्पलर्ज गर्न मन पर्छ र सान्ताले के ल्याएनन् आफै आफै खरीद गर्नुहोस्। त्यसकारण डिसेम्बर २th पछि अवधि विशेष रूपमा प्रभावकारी हुन सक्छ। नयाँ उपकरण विज्ञापनहरू (जस्तै आईफोन ११), भिडियो, र नयाँ मेसेजिंग / रचनात्मक जाँच गर्नको लागि यस समय लिनुहोस्। र जनवरी १ 26 वा भ्यालेन्टाइन डे सम्म रोकिनुहोस्। धेरै परम्परागत विज्ञापनदाताहरूले वर्षको सुरूमा उनीहरूको विज्ञापन फिर्ता लिन्छन्, बाँकीको अवसरको अर्को राम्रो विन्डो छोड्दै।
२. औसत अर्डर आकार बढाउनुहोस्।
जब प्रयोगकर्ता अधिग्रहण लागत वृद्धि, तपाईंसँग नाफा संरक्षणको लागि दुई विकल्पहरू छन्: तपाईंको ओभरहेड / उत्पादन लागतहरू काट्नुहोस्, वा औसत अर्डर आकार बढाउनुहोस्। भाग्यवस, बढ्दो औसत अर्डर आकार बढ्दै क्यू in मा के भइरहेको छ राम्ररी चलिरहेको छ - मानिसहरूले अधिक खर्च गरिरहेका छन्, दुबै आफैंमा र अरूमा।
औसत अर्डर आकार बढाउने धेरै तरिकाहरू छन्:
छुटका लागि अतिरिक्त सुविधाहरू प्रदान गर्दै
$ -उफ्ट छूट प्रयोग गर्दै ("spend X खर्च, अफ - अफ" प्रस्ताव)
तपाईं केवल यो औसत अर्डर आकार रणनीति पूर्ण रूपमा पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईको कम्पनी र तपाईको स्थितिमा निर्भर रहन्छ, क्यू4मा घाटा नेतासँग जानु र यसलाई तपाईको ग्राहक आधार बनाउनको लागि प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।
यदि तपाईंले घाटा-नेता रणनीति राम्रोसँग प्रबन्ध गर्नुभयो भने, तपाईं पनि भाँच्न सक्नुहुन्छ (वा धेरै स्लिम फाइदा पनि), तर तपाईंले आफ्नो खरीददारहरूको सूचीमा एक टन व्यक्ति थप्नुहुनेछ। पेयर गर्नुहोस् कि प्रभावी रिटेन्सन मार्केटि with, र क्रिसमसको लागि राम्रो अवसर हुन सक्छ जतिसक्दो नयाँ ग्राहकहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
It. यसको प्रतिक्षा गर्नुहोस् वा दक्षताको जेबहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
अवश्य पनि, सबैजना ईकामर्समा छैनन्। यदि तपाईं अनुप्रयोग मार्केटिंग वा नेतृत्व उत्पादन गर्नुहुन्छ भने, छुट्टिहरूले एक धेरै फरक समस्या प्रस्तुत गर्दछ।
फेसबुक विज्ञापनदाताहरु जो ईकॉमर्समा छैनन्, चौथो क्वाटरमा खर्च मापन गर्ने उत्तम समय अक्टूबर १ बीच हो धन्यवादबाट। त्यस समयमा सीपीएमहरू बढ्छन्, तर धेरै पनि होइन। त्यसो भए हामी सिफारिस गर्दछौं कि तपाई पछाडि तान्नुहोस् वा शिफ्ट खर्च नोभेम्बर २th बाट डिसेम्बर १० सम्म बिसाउनुहोस्।
यहाँ केहि अन्य सुझावहरू छन् जुन तपाइँले पीपी सीपीएम लागत बढेको समयमा बढ्दो मूल्यहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ:
यदि तपाईं चौथो क्वाटरमा पैसा खर्च गर्न लाग्नुभएको छ र तपाईं ईकमर्स कम्पनी हुनुहुन्न भने, अक्टोबर र नोभेम्बरमा सकेसम्म बढी खर्च गर्न फ्रन्टलोड गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
दर्शकहरु लक्षित गर्न को लागी:
उच्च माग अवधिको समयमा कम प्रतिस्पर्धी बजारहरूमा फोकस गर्नुहोस्।
एन्ड्रोइडमा अधिक बजेट विनियोजित गर्नुहोस्। यसले मूल्यमा कम स्पष्ट देखिएको देख्दछ।
EMEA (यूरोप, मध्य पूर्व, र अफ्रिका), APAC (एशिया-प्रशान्त), र LATAM (ल्याटिन अमेरिका) मा स्केल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभियानहरूबाट लाभांश डाटा जहाँ छुट्टी प्रतिस्पर्धा गहन छैन।
२०१ Q Q2019 NA (उत्तर अमेरिका) बाट छुट्टी प्लेबुक PDF
विश्वव्यापी बजारमा मापन गर्न मूल्य अप्टिमाइजेसन प्रयोग गरेर विश्वव्यापी लक्ष्यीकरण मापन गर्नुहोस्, जबकि एकै साथ प्रत्येक खरीदको लागि सबैभन्दा कम लागतको लागि पनि अनुकूलित गर्दै। त्यो विस्तार कार्य बनाउँदा ROAS लाई बचाउछ।
यसको नयाँ स्ट्रक्चर फर स्केल (S4S) फ्रेमवर्कको लागि फेसबुक अनुसन्धानले देखाएको छ कि जब विज्ञापन सेट प्रति हप्ता कम्तिमा unique० अद्वितीय रूपान्तरणहरू प्राप्त गर्दछ विज्ञापन सेट डेलिभरी स्थिर हुन्छ। उनीहरूले विज्ञापन सेटहरू बीच सिधा सम्बन्ध भेट्टाए जुन यस खण्डलाई प्राप्त गर्दछ, सीपीए घटाउँछ, र बलियो आरओएएस। कहिलेकाँही ROAS सुधार २ 50% भन्दा बढी हुन सक्छ।
न्यूनतम ROAS बिडिंगको साथ सानो सुरु गर्नुहोस्, तर प्रयोग गर्नुहोस्। न्यूनतम ROAS बिडिंगले विज्ञापनदाताहरूलाई प्रत्येक विज्ञापन सेटको लागि विज्ञापन खर्चमा उनीहरूको इच्छित फिर्ताको इनपुट गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं ०.०१% भन्दा ठूलो संख्याको साथ न्यूनतम ROAS सेट गर्न सक्नुहुनेछ, तब फेसबुकले तपाईंको विज्ञापन प्रदान गर्न रोक्नेछ यदि उनीहरूले त्यो निर्दिष्ट प्रतिशतमा हिट गर्न सक्दैनन्। यो राम्रो काम गर्दछ यदि तपाईं एक कम श्रोताहरू विरूद्ध एक कम ROAS गोल (<१%) परीक्षण गरेर शुरू गर्नुभयो भने, यदि त्यहाँ प्रदर्शन (१%, २%, आदि) नभए भने बढ्दो रूपमा इन्च गर्नुहोस्। उच्च सुरु नगर्नुहोस् र यसलाई फेरि स्केल गर्नुहोस्; न्यूनतम ROAS राम्रो कार्य गर्दछ लगातार वृद्धि भईरहेको छ।
मैन्युअल बिड्स खरीदको लागि AEO प्रयोग गर्नुहोस्। यदि तपाईं अटो-डिलीभरी वा अटोबिडको साथ कम-गुणवत्ता रूपान्तरणको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी स्मार्ट बिडहरू (बिड क्यापको साथ सब भन्दा कम लागत) मा स्विच गर्ने विचार गर्नुहोस्। अप्रत्याशित बिड शर्तहरू जस्तै छुट्टीहरूमा, स्मार्ट बिडहरू स्थिर वितरण कायम गर्नको लागि राम्रो तरिका हो।
अधिकको लागि योजना बारम्बार रचनात्मक ताजा लाई रचनात्मक थकान लड्नुहोस्। तपाईंले सायद यसका लागि समय भन्दा पहिले योजना बनाउनुपर्नेछ, किनकि प्रायः कर्मचारीहरू बिदामा कम्तीमा केही समय छुट पाउन चाहन्छन्। वा, यदि आवश्यक छ भने, एक रचनात्मक पार्टनरलाई हेर्नुहोस् क्षमता विस्तार गर्नुहोस्.
विकास छुट्टी-थीमाधारित रचनात्मक प्रासंगिकता स्कोर वृद्धि गर्न। यो छुट्टी विज्ञापन को उच्च लागत को केही कम गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
परीक्षण प्ले गर्न योग्य विज्ञापनहरू दर्शक नेटवर्कमा अधिक संलग्न, उच्च-गुणवत्ता स्थापनाहरू ड्राइभ गर्न। फेसबुक भन्छ यी विज्ञापनहरू कुनै पनि विज्ञापन ढाँचाको उत्कृष्ट प्रदर्शन भइरहेको छ।
भाग्यवस, महँगो दिन बित्यो। लगभग जादू जस्तै, डिसेम्बर २ on माth, लागत ड्रप। धेरै जसो इकमर्स मार्केटरहरूले आफ्नो बजेट खर्च गरेका छन्, उनीहरूको सूची बेच्यो, र गरेको बर्षलाई ध्यान दिनुहोस्।
यो तब हुन्छ जब नन-इकमर्स मार्केटरहरू - खेलहरू र मोबाइल अनुप्रयोगहरू जस्तै - तिनीहरूको हेयडे हुन्छ। उनीहरूले डिसेम्बर २th देखि फेब्रुअरी १,, २०२० मा भ्यालेन्टाइन डे मार्फत वर्षको सब भन्दा कुशल सीपीएमहरूको मजा लिने छन्।
डिसेम्बर २th देखि भ्यालेन्टाइन डेको माध्यमबाट सीपीआई र फ्लस इन्भन्ट्रीमा रहेको ड्रपको फाइदा लिनुहोस् लिलामी बिक्री। क्रिसमस पछि पनि नयाँ उपकरण प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गर्न एक उत्तम समय हो, र उपकरण-विशेष रचनात्मक प्राय: प्रासंगिकताको लागि तपाईंलाई अतिरिक्त बम्प प्राप्त गर्न सक्दछ। अवश्य पनि, यदि तपाइँ यी जादू दिनहरूमा बिडिंगमा प्रभुत्व जमाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले समय भन्दा पहिले केहि बजेट छुट्याउनु पर्छ।
On. मोबाईलमा फोकस गर्नुहोस्।
सबैलाई थाहा छ मोबाइल यातायात अब डेस्कटप ट्राफिक भन्दा बढी छ। तर धेरै बजारहरु अझै पनी विश्वास गर्छन् मोबाइल यातायात रूपान्तरण गर्दैन... वा कमसेकम कि यसले रूपान्तरणको साथै डेस्कटप ट्राफिकमा परिवर्तन गर्दैन।
यो अब सत्य हुँदैन।
एक अध्ययन गुगल शपिंग विज्ञापन पछिल्ला केही वर्षहरूमा मोबाइल रूपान्तरण दरमा नाटकीय वृद्धि भएको छ। मोबाईल उपकरणहरूमा उनीहरूको खरीददारको यात्रा सुरु र अन्त गर्ने दुकानदारहरूको लागि रूपान्तरण दर २252२% ले वृद्धि भएको छ।
तर पर्खनुहोस् ... त्यहाँ अझै छ:
डेस्कटपमा आफ्नो खोज सुरू गर्ने र मोबाइलमा उनीहरूको खरीद पूरा गर्ने किनमेलकर्ताहरूको पथ वर्षको बर्षमा २259%% बढ्यो।
अर्को शब्दमा, केहि व्यक्तिहरू डेस्कटपमा भन्दा मोबाइल मार्फत जाँच गर्न रुचाउँछन्.
अवश्य पनि, त्यो गुगल शपिंग हो, फेसबुक विज्ञापन होईन। तर फेसबुक यसको आफ्नै अनुसन्धान गर्नुभयो। उनीहरूले यो पनि पत्ता लगाए कि मोबाइल प्रयोगकर्ताहरू मोबाइल शपर्स भएको छ।
Use. भिडियो प्रयोग गर्नुहोस्।
यदि तपाईं भिडियोमा लगानी गर्न वा भिडियोमा अधिक लगानी गर्न पछाडि पर्खिरहनु भएको छ भने, यो क्यू हुन सक्छ जुन तपाईंलाई Q4 2019 को लागि आवश्यक छ।
अमेरिकामा सर्वेक्षण गरीएको लगभग in मध्ये १ मोबाइल पसलेले भने भिडियो नयाँ उत्पादनहरू पत्ता लगाउनको लागि उत्तम माध्यम हो.
त्यसो भए, यदि तपाईं अधिक खरीददारहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने, अधिक भिडियोहरू बनाउनुहोस् - दुबै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लागि। र हो, भर्जिनिया, अझै प्राप्त गर्न पर्याप्त समय छ भिडियो प्रमुख किनमेल बिदाको अघि बनाइएको।
तपाइँको कम्पनी वा एजेंसी Q4 फेसबुक विज्ञापन लागत वृद्धि कसरी प्रबन्ध गर्दछ? Q4 को लागी तपाइँको रणनीतिहरु गत वर्ष राम्रो काम गरे? तपाईं कहाँ जानुहुन्छ रणनीति बनाउन को लागी भयो भनेर सोच्नुहोस्। केवल छिटो सोच्नुहोस्; कालो शुक्रवार हामीमाथि छ।
टैग: विज्ञापन खर्च तरंगकालो शुक्रबारबन्डलिंगग्राहक अधिग्रहणडिसेम्बर बिदाफेसबुक विज्ञापनहरूफेसबुक विज्ञापन ड्यासबोर्डगेमि advert विज्ञापनदाताहरुगुगल शपिंग विज्ञापनछुट्टी सीपीएममापनका लागि संरचना